Zavatra efa nampoizina ihany fa efa nanaiky ny Malagasy, ka tsy maintsy zakaina aloha. Ireny niteraka adihevitra lehibe ireny ny fanambarana navoakan’i Mahery Lanto Manandafy izay isan’ny nanohana fatratra an-dRajoelina, fa mpisoloky Atoa Holijaona Rabaonarijaona nalaza tamin’ny raharaha Flamco nakana volam-panjakana amina miliara dolara tany amin’ny taona 1994. Izy no voatonona tao anatin’ilay ampamoaka fa nivarotra ny IEM tamin-dRajoelina, ary io tetikasa io aza toa vao mainka voahivahiva sy miteraka fahafaham-baraka goavana ho an-dRajoelina sy ny ekipany noho iny raharaha iny. Ny olona samy nanohana ny filoha no nifanebaka sy mifamoaka tsiambaratelo, izay sokajiana ho tsiambaratelom-panjakana mihitsy. Manaiky fa marina izany ny zava-boalaza matoa tsy niteny? Io ihany koa fa niala ny Filohan’ny arofenitra ny fiadidiana ny Repoblika noho ny antony ara-pahasalamana raha ny fanazavana. Na izany aza dia tsikaritra fa tena misy tsy milamina ao anaty fanjakana ao, fa ezahina hafenina saingy vaky am-batolampy ihany. Ny dosien’ny minisitra teo aloha, izay mbola mialokaloka ao anaty fanjakana ao noho ny fanodinkodinana fananam-panjakana dia fiara tsy mataho-dàlana 9 isa izao, dia mety ho vaky bantsilana alohan’ny fialan’ny tale jeneralin’ny Bianco ankehitriny, izay hanaratsy endrika hatrany ny fitondrana satria tena misy jiolahy mihaja tokoa any an-dapa any, raha ity no dinihina. Tsy tafapetraka ny fahefam-panjakana eto, raha oharina amin’ny tany aloha hany ka toa fanjakana malemy na ara-politika na ara-teknika na ara-stratejika no eto. Tsy toy ny tamin’ny andron’ny Amiraly Ratsiraka na i Marc Ravalomanana, afaka tena nandrindra sy nandamina ny firenena. Nanomboka ny taona 2009 no nivaona tanteraka ny fitondrana ny firenena, efa fantatra ihany hoe iza no nanongam-panjakana tamin’izany. Tonga indray ny IEM; tsara rafitra an-tsoratra saingy mbola baraingo goavambe ny fanatanterahana azy